Teepee - Mili Mili
Teendhooyinka Indian Teepee ee carruurta.
Teepee ee carruurta waa fikrad fiican u ah qurxinta geeska carruurteenna ama hadiyadda dhalashada. Teendhooyinka waxay leeyihiin qaab caadi ah, waxaa laga tolay maro qaro weyn ama maro linen ah waxayna ku dhamaadeen jarista suuf. Waxaan leenahay naqshado iyo moodooyin badan - waxaan ubad iyo gabadh u abuuri doonnaa wiilal yaryar.
Ulaha geedku ka kooban yahay oo xirmay xarkaha ayaa kala furmay oo jilicsan, oo waxay ku qarsoon yihiin tunelada hoose ee hoostiisa. Teepee loogu talagalay carruurta, oo laga heli karo dukaankayaga internetka, ayaa waxaa loo abuuray si ay suurtagal u tahay in lagu dhejiyo qaab dhismeedka oo dhan iyadoo la adeegsanayo xarig qaro leh oo kuleyl leh. Teendhooyinka waxay leeyihiin derbiyada 5 iyo saldhig santuuq leh, taas oo ka dhigaysa inay ka xasilloon yihiin oo ka ballaaran yihiin teepee oo leh saldhig laba jibbaaran. Moodhadhka oo dhan waxay leeyihiin daaqad dhanka bidix.
Waxaan teendhooyin ka sameysanaa gudaha Poland, badiyaa waxsoosaarka asalka guryaha. Waxaan daryeela faahfaahin kasta iyo tayo sare. Dukaanka internetka ee tipi wuxuu ka kooban yahay tilmaamo iyo dabool loogu talagalay carruurta carruurta dhigta. Intaa waxaa sii dheer, dadka iibsanaya teendho loogu talagalay carruurta, dukaanka khadka tooska ah ayaa ka caawin doona xulashada gogol jiif oo raaxo leh, oo laga heli karo naqshadaha kala duwan. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku raaxeysatid adduunkeena.
Teendhooyinka teendhooyinka "linen dabiiciga ah"
Ku daadi teendhada leh frills "budo bur ah"
Teendhooyinka teendhooyinka "dabiiciga ah"
Teende teendhooyin leh frills "shabby chic"
"Marsala" linen gogoshii teendhada
Teendhooyin loogu talagalay carruurta "ubax duurjoogta ah"
Teendhooyinka Tipi "Jeans"
Teendhooyinka teendhooyinka "Beż" ee carruurta
Classic teepee "caleen timireed"
PLN 385.00 PLN
Teendhooyin "Biel" linen teepee teendho
Teendhooyinka teendhooyinka "Ubaxyo cirro leh"
Ku dheji teendhada leh frills "dad"
PLN 539.00 PLN
Teendhada teendhooyinka "Badda iyo Qorrax"
"Xiddig Dahab ah" linen linenpepepe teendho
Teendhooyinka Tipi "Mint iyo ciid"
Teendhooyinka teendhada "Dhibcaha Polka Dahabka ah" ee loogu talagalay carruurta
Teendhooyinka teendhooyinka "Pink huruud"
Teendhooyinka teendhooyinka "Akcent" ee carruurta